Tani wey fiicantahay in aad ogaatid ama taqaanid.
Tani wey fiicantahay in aad ogaatid ama taqaanid
Spridningen av coronaviruset Publicerad 16 mar 2020 kl 16.56
Tan iyo inti uu dilaacay Coronavirus, tirada guud ee dalka Sweden ku dhimatay ilaa maanta oo taariikhdu tahay 23 Marso, waa 33 qof. Ugu yaraan 6 qof oo ka mid ah dadki ku geeriyooday magaalada Stockholm iyo hareeraheeda waxay ahaayeen Somali-Swedish ama dad asalkoodu Somali yahay oo haysta jinsiyadda Swedishka sida uu soo tebiyay telefishanka Sweden ee SVT. Dadka dhintay waxay degaan ahaan ku noolaayeen degmooyinka Kista / Rinkeby, Spånga / Tensta iyo Järfälla
Jariiddada Expressen ayaa akhbaar la xiriira Coronovirus horey ugu faafisay Af-somali iyo afka carabiga. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xaaladda coronavirus waxaa laga heli karaa ururka dhakhaatiirta Somali-Swedish. Mahadsanidiin.
kKooxaha khatarta uGu jira Coronavirus:
Suaalaha inta badan la is-weyddiiyo iyo jawaabahooda waxaad ka heli kartaa bogga Heyadda Fayoqabka ummadda. Suaalaha waxaa loo tarjumay ingiriisi.
Waxyaabaha qofka la farayo in uu is-ilaaliyo shaqsi ahaan waxaa ka mid ah faraha uu dhaqdo iyo in uu hindhiso isagoo ama iyadoo ay gacanta u laabantahay si uusan cudurka u faafin. Iska ilaali in aad taabato indhaha, sanka iyo afka. Guriga joog haddii aad xanuunsantahay, isticmaal spiritka gacmaha (faraxal) haddii aysan saabuun kuu oolin guriga.
Dhammaadki usbuucan waxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ku dhawaaqday in ay ku talineyso in aysan fiicnayn in loo safro dal kasta oo dunida ka mid ah sababo la xiriira faafidda Coronavirus kaasoo dalal badan fara ba`an ku haya.
Sida qaalibka ah laba kooxood ayaa khatar xooggan ugu jira Coronavirus kuwaasoo kala aha dadka da´da ah iyo dadka qaba cudurrada ay ka mid yihiin: Wadna xanuunka, cudurrada Sambabaha, Dhiig karka, Kansarka iyo Sokorowga ama kaadi macaanka.
Ka ilaali naftaada iyo kuwa kalena faafidda iyo isqaadsiinta. Macluumaad iyo akhbaar la soo uruuriyay kuna saabsan faafidda caabuqa iyo habki aad uga taxaddari lahayd isagana ilaalin lahayd dadka kalena uga ilaalin lahayd iyo macluumaad kale waxaad ka heleysaa Heyadda Fayoqabka Ummadda iyo 1177 CARE Guide oo ah Tusmada Taxaddaridda.
Waxyaabaha qofka la farayo in uu isagu is-ilaaliyo iyo kuwa kaleba waa
--faraxalka iyo in uu hindhiso isagoo gacanta u laabantahay si uusan cudurka u faafin.
--Iska ilaali in aad taabato indhaha, sanka iyo afka. Guriga joog haddii aad xanuunsantahay
--isticmaal spiritka gacmaha (faraxal) haddii aysan saabuun kuu oolin guriga.
Suaalaha Ku Saabsan Astaamaha iyo Talooyin Caafimaad
Haddii adiga ama mid ka mid ah qaraabadaada uu dareemayo astaamo uuna doonayo in uu helo talooyin caafimaad, ha la xiriiro Tusmada Tabantaabada 1177. Telefanka lagala xiriirana waa 1177. Waxaad kaloo akhbaar dhammeystiran oo Corona ku saabsan ka heli kartaa bogga Tusmada Tabantaabada CARE GUIDE. Heyadda Fayoqabka ummaada iyadaduna waxaad boggeeda ka heli kartaa jawaabo badan oo loo tarjumay afka ingiriiska.
Haddii aad qabtid suaalo ku saabsan Coronavirus ee aan khuseyn astaamaha waxaad wici kartaa lambarka akhbaaraadka qaranka 113 13. Jawaabaha suaalaha loogu weyddiin badanyahay waxaad ka heli kartaa heyadda fayoqabka ummadda
Waxaa tarjumay Abdi-Noor Mohamed.
LÄS MER: Nu publicerar vi de viktigaste nyheterna på fler språk
Blekinge sticker ut – med lägre andel döda